‘ट्याक्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने काम हाम्रो होइन, सरकारी घूसपैठ हो’ भन्दै यसरि गर्जिए श्रेष्ठ – Enepali Samchar
‘ट्याक्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने काम हाम्रो होइन, सरकारी घूसपैठ हो’ भन्दै यसरि गर्जिए श्रेष्ठ
February 4, 2021 February 4, 2021 adminLeaveaComment on ‘ट्याक्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने काम हाम्रो होइन, सरकारी घूसपैठ हो’ भन्दै यसरि गर्जिए श्रेष्ठ
आमनागरिक अब कहिल्यै बन्द र आमहड्ताल भोग्‍नुनपर्ने आशामा थिए । नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पार्ने यस्ता कार्य कसैले पनि नगरोस् भन्‍ने थियो । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले बिहीबारका निम्ति आह्वान भएको आमहड्तालको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रतिगामी’ कदमका कारण आमहड्ताल आह्वान गर्नुपरेको दलिल पेस गर्दैछन् । ‘नागरिकलाई सास्ती दिन किन यस्तो हर्कतमा उद्यत भएको हो ?’ यिनै प्रश्‍नको सेरोफेरोमा नेकपा दाहाल–नेपाल खेमाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :
तपाईंहरूले किन दैनिक जीवनमा सास्ती हुने काम गर्नुभयो ?
ओली सरकारले आमनामगरिकलाई असर गर्ने कार्य गरिरहेका कारण हामी बाध्य भएर यस्तो आम हड्ताल जस्तो अप्रिय काममा लाग्यौँ । सरकारले नै यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको हो । हामीले जनताका साथ गर्न खोजेका हौँ । दुःख दिन आन्दोलन गरेका होइनौँ । हाम्रो सूचीमा समेत बन्द–हड्ताल थिएन । क्षणिक सास्तीले दिगो शान्ति हुन्छ र मुलक विकासको पथमा जान्छ भने आमनागरिक हड्तालतिर उन्मुख हुनैपर्छ ।
तर, सरकारले प्रतिगामी कार्यसँगै संवैधानिक परिषद्‍बाट गैरसंवैधानिक शैलीमा निर्णय गराई संसदीय सुनुवाइबिना बलजफ्ती रूपमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथ–ग्रहणसमेत गराएपछि अब आन्दोलनका रूपमा अघि बढ्न सरकारको कदमको विरोधका लागि आमहड्ताल गरिएको हो ।
सत्तामा पुग्‍ने, रजगज गर्ने यहाँहरू अनि दुःख पाउने आम जनताले ?
प्रतिगमन, असंवैधानिक नियुक्ति र कामचलाउ सरकारको ‘फासिस्ट गुण्डाराज’विरुद्ध देशव्यापी आमहड्तालमा होमिएका हौँ । प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्न, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पार्न र संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि आमहड्तालको पाटोबाट सांकेतिक रूपमा बन्द गरेका हौँ ।यसप्रकारको बन्दले नागरिकलाई कष्ट हुन्छ, तर दिगो रूपमा नागरिकको हितका लागि गरिएको कदम हो, यो । सत्तामोह वा त्यहाँ गएर रजगज भन्दा पनि हामी नागरिकका लागि काम गर्न र सहजीकरणका लागि यो प्रकारको कार्य गरिरहेका छौँ ।
दैनिक जीवन–यापनका लागि मजदुरी गर्ने व्यक्तिका ट्याक्सी जलेका छन् नि त ?
ट्याक्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने काम हाम्रो होइन । यसमा राज्यसंयन्त्रकै घूसपैठ छ भन्‍नेलाग्दै छ । हामीले आमजनतालाई हामी तपाईंहरूसँग छौँ । सरकारको प्रतिगामी सोचविरुद्ध लड्दा साथ मागेका हौँ । दुःख दिने ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्‍न हुने काम हामीबाट भएको छैन । हुँदैन पनि । हामीले हाम्रा क्याडर र साथीहरूलाई जबर्जस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छौँ । क्षति हुने काम रोक्न भनेका छौँ ।
ओली सरकारको गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी निर्णय अन्त्य गर्न बन्द आह्वान गरिएको हो ।
तोडफोड गर्ने, गाडी जलाउने कार्य कसले गर्‍याे त ?
आमहड्तालमा रहेका हामी र हाम्रा साथीहरूबाट यस्तो कार्य भएको छैन । तर सत्तापक्षले यसतर्फ जान बाध्य पारिरहेको भए पनि संयम अपनाएका छौँ । हाम्रा सयौँ नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर सरकारले भीडन्ततर्फ लगेको छ । हामीले परीक्षा दिन जाने, अन्य आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवा, प्रेस लगायतलाई ध्यान दिन निर्देशन गरेका छौँ । सडकमा गाडी देख्नेबित्तिकै जलाउने, टाढैबाट ढुंगा हान्ने यस्ता कार्य हामीबाट भएका छैनन् र हुँदैन पनि ।
आमहड्ताल शान्तिपूर्ण कार्य नै हो भन्‍ने लाग्छ यहाँहरूलाई ?
पक्कै पनि । किनकि हामीले कुनै प्रकारको बल प्रयोग गर्ने र आमजनतालाई दुःख दिने भन्दा पनि जनताको साथ यहाँ खोजेका छौँ । जनताले साथ दिइरहनुभएको छ । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको ओली सरकारको गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी निर्णयको अन्त्य गर्न पनि बन्द आह्वान गरिएको हो ।
क्षणिक सास्तीले दिगो शान्ति हुन्छ र मुलक विकासको पथमा जान्छ भने आमनागरिक हड्तालतिर उन्मुख हुनैपर्छ ।
यसमा जनताले साथ दिएका छन् र बन्द सफलता उन्मुख रहेको छ । हामी नेतृत्व तहमा रहेकाहरू विभिन्न स्थानमा पुगेर बन्दलाई शान्तिपूर्ण र सफल बनाउन सक्रिय छौँ । हामी जनताप्रति संवेदनशील पनि उत्तिकै छौँ ।विरोध गर्ने अन्य उपाय हुँदाहुँदै किन आमहड्तालकै बाटो रोज्‍नुभयो त ?
हामीले जनताको समर्थनका लागि पनि यो बाटो तय गरेका हौँ । आमजनताको साथले मुलुक परिवर्तन हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको र अझै जनता सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ भनी त्यसको जानकारी दिन पनि खोजेका हौँ । १० वर्षे द्वन्द्व र जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट हासिल उपलब्धि एक व्यक्तिको सनकले धरापमा परेको कुरामा आम जनतालाई पनि चिन्ता छ । त्यसैले जनताको कुरालाई लिएर हामी आन्दोलनमा होमिएका हौँ ।
तर, आम जनताले सास्ती त पाए नि, होइन र ?
हो, क्षणिक सास्तीले दिगो शान्ति हुन्छ र विकासको पथमा मुलुक जान्छ भने आमनागरिक त्यतातिर उन्मुख हुनैपर्छ । कोभिडपछिको अवस्थामा हामीले जनतालाई सास्ती दिने कुनै चाहना नै थिएन । तर सरकारको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध लाग्नैपर्ने बाध्यताले हड्ताल जस्ता आन्दोलनमा होमिनुपरेको हो । हामीले जनताको साथका लागि अनुरोध गरेका हौँ । जबर्जस्ती गर्ने हाम्रो सोच छैन । सत्तामोह वा त्यहाँ गएर रजगज भन्दा पनि नागरिकका लागि काम गर्न र सहजीकरणका लागि यो प्रकारको कार्य गरिरहेका छौँ ।
यहाँहरूका नेताहरू बिहानैदेखि पक्राउ परेको अवस्थाबारे के छ यहाँको धारणा ?
हो, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ । आमनागरिक हाम्रो पक्षमा देखेर अत्तालिएको सरकारले हाम्रा नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने काम गरेको छ ।
सरकारले आफैँले अप्रिय घटनासमेत घटाएको हुन सक्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत छौँ । कुनै अप्रिय घटना आमहड्तालमा हाम्रो तर्फबाट भएको छैन । राज्यसंयन्त्रले यस्ता घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रा कार्यकर्ता र नेतृत्वलाई ‘इरिटेड’ गर्ने र त्यसतर्फ उद्यत गराउने कार्यमा सरकार लागेको देखिन्छ । हाम्रा सडकमा हिँडेका कार्यकर्ता–नेतासमेत पक्राउ परेका छन् ।के यही हो त लोकतन्त्रको अभ्यास ? यस्तै असंवैधानिक कदम स्वीकार गर्न संविधान लेखिएको हो ? यस्तैका लागि सहिदले आहुति दिएका हुन् त ? यसमा हामी अझै स्पष्ट हुनुपर्छ । र यो कदमको घोर निन्दा र विरोध गर्नुपर्छ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो फोरजीमा चल्ने वाईफाई, प्रति जीबी ११ रुपैयाँसम्ममा चलाउन मिल्ने
यस्तो छ नारायणहिटी गेटमा हुने ओली पक्षीय जनसभाको गीत [भिडियोसहित]
राजा महेन्द्रको समयको एक गोप्य अमेरिकी रिपोर्ट भन्छ – दुई देशलाई भिडाउन नेपाली माहिर छन् !
नेपालको बदनाम गर्दै चर्चित बेलायती पत्रिकाले यस्तो लेखेपछि